Haddii aad isticmaasho casriga ah, oo aan hubin in aad samayn aad iska cad lahaa iyaga loo badinayaa inay noloshu ka soo baxdaaye batteriga. Tani waa run gaar ahaan sababtoo ah waxaan u isticmaalno telefoonka wax kasta. Waxay yihiin kamaradaha, roona, e-akhristayaasha, telefoonada iyo maamulayaasha document ama xataa Hagaha oo dhan ee hal xirmo yar. Istimaalka Tani haddii aad doonistii naga casriga ah waxay keeni kartaa in arrimaha nolosha batari aan loo eegayn inta saaraha jeedaa ay batari fiican.
Waxaanu farta kaliya arimahan si aad u muujiso dhibic. Batari nolosha la dhimay waa xaqiiqo ah in ay tahay inay ka badan aad u malaynayso. Marka dhibaato waa wax caadi ah, waxaa jira xal aad u badan, waxa uu.
Waxaa jira dhowr siyaabood oo dheereynayo nolosha batari ku saabsan Samsung casriga ah, laakiin laga yaabee ugu fudud ee siyaabahan waa isticmaalka app ah. Sidaa darteed waa in la filayaa in ay jiri doonaan boqolaal codsiyada kuwaas oo loogu talagalay this ujeedada gaarka ah. Maxaa yeelay, waxaa aad u badan yihiin, waa dhibaato wayn, oo isku dayaya in la helo mid ka mid sax ah. Nasiib wanaag idiin, Annagu waxaan imtixaannay badan oo ka mid ah barnaamijyadooda la heli karo iyo degeen on 3 in aad si fiican u shaqeeyaan si dheereynayo nolosha batteriga.
Daafaca 1. Casiirka
Features Muhiimka ah: app wuxuu kuu ogolaanayaa inaad dheereynayo nolosha batari by maareeyo sida Chine aad u ordaan. Waxaa maamula xiriir Wi-Fi iyo xogta mobile labo ka mid ah hawlaha Cunidda ugu awood ku saabsan telefoonka. Waxay leedahay qaabab set-up kala duwan oo ay ku jiraan "mode awood xad gudubku" ama "dheeli tiran" mode awooda u ogolaanaysa in aad doorato oo dhinacyo aad telefoon in ay gabi ahaanba la xiray, kaas oo Apps si ay u muujiyaan.
2. Battery Daafaca
Features Muhiimka ah: Wixii app oo lacag la'aan ah. Daafaca Battery waxa uu leeyahay muuqaalada filaysaa ka app ah lacagta caymiska. Hal feature ugu yaab leh oo ku saabsan app this marka laga reebo xaqiiqada ah in ay kaa caawinaysaa in la badbaadiyo nolosha batari waa in aad ku tusi doonaa boqolkiiba batari saxda ah ee aad farriimaha bar. Tani waa meesha ugu sareysa ee xaqiiqda ah in uu kuu ogolaanayaa inaad leedahay hab hurdo.
Features Muhiimka ah: app wuxuu kuu ogolaanayaa inaad go'aamiyo Apps bilaabi doonaa socda sida ugu dhakhsaha badan kabaha telefoonka kor. Waxay leedahay laba hababka; asaasiga ah iyo kuwa sare. Hab sare ayaa gacanta ka badan hal aasaasiga ah marka la eego barnaamijyadooda xannibaya ka depleting noloshaada batteriga.
Marka si sax ah loo isticmaalo ee Chine kor ku xusan si toos ah kaa caawin doona inaad la kordhiyo nolosha aad batariga ee. Waxaa jira xaalado ay si kastaba ha ahaatee xitaa codsi sida kuwa aan kor ku xusan ayaa ka hadlay guul daraystaan ​​in ay shaqeeyaan ama ma caawin maxaa yeelay, waxaad durbaba laga badiyay awood aad u badan. Haddii ay sidaa tahay waxaa weli jira qaar ka mid ah tallaabooyinka aad qaadi karto in la kordhiyo nolosha batteriga. Waxaan soo jeediyay shan iyaga ka mid ah hoos ka.
Top 5 habab kale oo ay u xaliso dhibaatada nolosha Battery
Telefoonada Samsung aan qadarin ay nolosha batari si wax kasta oo yar oo aad sameyn kartid si dheereynayo nolosha batari lagu soo dhaweyn doono. Fahamka this, waxaan u imid ilaa 5 jid oo sahlan in la kordhiyo noloshaada batteriga. Maskaxda ku hay in xataa wax yar oo leeway dhignaan kartaa farqiga u dhexeeya batari dhintay iyo in telefoon muhiim ah. Bal aan u hesho in ay
1. Dami kalle
Haddii aad ku sugan tahay goobta, halkaas oo kalle oo la karti ama ay taageerto, waxaad u baahan doontaa in ay gab haddii aad rabto in lagu badbaadiyo on batteriga. Tani feature aad telefoon Samsung baahneyn depletes aad batteriga. Waxaa kale oo lagu talinayaa in la damiyo Switch Smart gaar ahaan marka batari waa mid aad u yar yahay.
2. muuqaalada Disable aadan la isticmaalayo
Marar badan waxaa jira Chine gaar ah ama qaababka aad u baahan tahay lagama maarmaan ah ama isticmaalka aan samayn. Waa in aad gab oo dhan kuwa aad ha isticmaalin si loo badbaadiyo nolosha batteriga. Halkan waxaa ku qoran tusaale ku saabsan sida loo gab app aadan la isticmaalayo. Riix Settings Codsiyada ah, dooro app aad rabto in aad gab ka dibna Tubada on Disable.
3. Isticmaal hab keydinta awood
Inta badan telefoonada Samsung leeyihiin laba hababka keydinta xooggiisa; hab keydinta xoog iyo aalladda hab keydinta awood. Dooro mid ka mid ah sida ay u kala awood badan aad ka tagay in kastoo aad waa inay ogaadaan in hab Ultra baado awood yareyn doontaa waxqabadka barnaamijyadooda qaar ka mid ah.
4. Dami Adeegyada Goobta
Arrin kale oo si ba'an u depletes aad batari waa adeegyada goobta si haddii aad ka yartahay batari, tani waxay noqon lahayd feature fiican loo damiyo. Si aad u dami adeegyada goobta tuubada saldhigyada, markaas Asturnaanta iyo Ammaanka, Location ka dibna toggle wareegto si off.
5. Demi Google Hadda
Haddii aad isticmaasho Google Hadda, waxaa deminta kaa caawin doona inaad hoos u xaaro batteriga. Si aad u samayno, jaraa'id iyo hay badhanka guriga ah ee aad taleefan ka dibna jiidi menu Hamburger ku soo baxay kabacdi si xaq.
Markaas guji goobaha ka dibna Cards oo markaas dami ah "Show Cards" doorasho.
Sida loo Play Flash on Samsung casriga
> Resource > Samsung > Sida loo dayactir casriga Battery Dhibaatooyinka Isticmaalka Manager Battery Samsung ayaa